ERP (Enterprise Resource Planning system) | Global Connect Asia : ERP | Web Builder | GPS | Judgify | Gevme | Software Solutions Company in Myanmar
(+95) 9964404011, (+95) 973142903
Stunning sites to suit your business
Secure your sites and apps
Be an expert in IT
Providing Innovative Pieces to the Digital Puzzle
Home / Blog / Other Technology Trends / ERP (Enterprise Resource Planning system)
28 June 2018 news
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နဲ့ အသေးဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာ On paper နဲ့ အလုပ်လုပ်သည့်အခါ အချိန်ကြာတာတွေ၊ စာရင်း လွဲမှားတာတွေရှိတတ်တော့
အချိန်ကုန်သက်သာပြီး တိကျမှန်ကန်တဲ့ ERP system ကိုသုံးဖို့ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ဆိုတော့ ERP ဆိုတာ ဘာလဲ ? ဘယ်လိုတွေ အသုံးဝင်လဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံးသိဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။
ERP ကို Enterprise Resource Planning system လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ERP ထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ ဆိုရင် CRM (Customer Relationship Management), Website/e-Commerce,
Billing(ငွေတောင်းခံခြင်း), Accounting(စာရင်းကိုင်), Manufacturing(ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း), Warehouse, Project Management(စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း) တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system)ဟာ ဒါတွေအားလုံးကို All in One ဖွဲ့ စည်းထားပြီးတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိတိကျကျ နဲ့ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် ။ All in One ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Manufacturing ကနေ Product တစ်ခု ထုတ်လုပ်တယ် ၊ ပြီးတော့ Sale Management ကနေ ရောင်းတယ် ၊ ရသမျှ Amount နဲ့Profit ကို Accounting ကနေ ထိန်းသိမ်းရတယ် ။
Odoo ERP ဟာ Manufacturing , Sale Management , နဲ့Accounting ဆိုတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ် သုံးခု လုံးကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ Manage လုပ်စရာလိုမယ် ။ ဒါဟာ Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system) သုံးရခြင်းရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။
• Website Edition
• Automated Stock Update
• Automated Calendar
• Automated Invoicing
• Efficient Integrations
& More features………
ဒီ features တွေအကုန်လုံး Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system) စနစ်တစ်ခုတည်းမှာ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့အတွက် Processes တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Odoo ERP စနစ်တစ်ခုလုံးကို Cloud ပေါ်မှာ
တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် အခြားကုန်ကျစရိတ်တွေ လျော့ချနိုင်တယ် ၊ နောက်ထပ် ဘယ် Software / Hardware ကိုမှ ထပ်မံ install လုပ်စရာ မလိုဘဲ internet ရတဲ့ မည်သည့်နေရာမဆို
အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု့ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ Odoo ERP (Odoo Enterprise Resource Planning system) မှာဆိုရင် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ရှိနေပါသေးတယ် ၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်လာမယ့် posts တွေမှာ လေ့လာဖတ်ရှု့ နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လူကြီးမင်းက manufacturing တွေ ဒါမှမဟုတ် distribution လုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Business Owner တစ်ယောက်သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
Odoo ERP(Odoo Enterprise Resource Planning system) ဟာလည်း လူကြီးမင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲကို အချိန်တိုတိုနဲ့ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် Key တစ်ချောင်းပါပဲ။
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမုိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် ERP System အသုံးပြုလိုသူများ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Global Connect Asia Co., Ltd. မှ အထူးဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
Email: kaungmyatthu@global-connect.asia Webiste:
ERP Myanmar Manufacturing System
Manufacturing ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဘာကြောင့် Event Management Software တွေကို ပိုမိုရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါသလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နဲ
Human Resource Management ဆိုသည်မှာ ......
ONLINE REGISTRATION PLATFORM IN MYANMAR
လူကြီးမင်းတို့ Events များတွင်
GCA GPS for Myanmar (2018)
Global Positioning System လို
EVENT MARKETING AUTOMATION AT YOUR FINGERTIPS
Online Event Ticketing System in Myanmar
ASOCIO ICT SUMMIIT 2016
ASOCIO ICT SUMMIT 2016
Awards Management Tools
Best Tools for an Event Planner
Enterprise Resource Planning Guide
erp in myanmar
erp software company in myanmar
erp software myanmar
ERP System in Myanmar
Event by GEVME
+ ERP: Enterprise Resource Planning
+ IT Security & Consulting
+ IT Training & Outsourcing
+ Our Team - Join The Team
+ Careers - We Are Hiring Now!
Myanmar (+95)-9-7314-2903, (+95)-9-964-404011
Email Global Support
GCA (Myanmar) SITEMAP
Get fresh insights, optimization tips, product updates and more. Subscribe Today!
Copyright © 2012-2016 Global Connect Asia (Myanmar).
Come Socialize With Global Connect Asia (Myanmar)